မီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အများကြီးမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး ဆိုတဲ့ အကယ်ဒမီ ပိုင်ဖြိုးသု ⋆ Popular
ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေရရှိထားသူကတော့ အကယ်ဒမီပိုင်ဖြိုးသုပါ။ သူ့အတွက် ဒီနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု (အကယ်ဒမီ)ပေးပွဲကို ခင်ပွန်းနဲ့အတူ တက်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်ရကြောင်းကိုလည်း သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသု က ခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။. . .
“သုသုတို့နှစ်ယောက်အတွက် ဒီနှစ်အကယ်ဒမီက ပထမဆုံးနှစ်ယောက်အတူတက်ခွင့်ရတာပေါ့။နှစ်ယောက်အတူ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားလည်း ဒီနှစ်မှာရုံတင်ပြီး နှစ်ယောက်အတူတက်ရတဲ့အတွက် အရမ်းပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ သုမေမေရယ် သုံးယောက်ပေါ့။” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
မီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အများကြီး မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူးလို့ ပြောလာတဲ့သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုက. . .
“သု အကယ်ဒမီက အများကြီး မမျှော်လင့်ထားဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနှစ်မှာ ကားကောင်းတွေအရမ်းများတယ်။အားလုံးတော်တဲ့ ကောင်းတဲ့သူတွေကြီးပဲလေ။ သူကအရင်ကတည်းက ဘ၀မှာ ဘာကြီးဖြစ်ချင်တယ်၊ဘာကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး အကြီးကြီးတွေ မမျှော်လင့်တတ်ဘူး။ရလာမှ ဖြစ်လာမှ ပျော်စရာရှိရင်ပျော်တယ်။ သုတို့ အလုပ်က အဓိက ပရိသတ်က အသိအမှတ်ပြုပေးတယ်။လက်ခံပေးတယ်။သူတို့အကယ်ဒမီရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးကြတာ ဘာဘဲပြောပြော ကိုယ့်အပေါ်မေတ္တာရှိလို့ပေါ့။ ပရိသတ်က အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်လည်း သုအရမ်းလည်း ၀မ်းသာပါတယ်။ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ မီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သတ်ရင်လည်း သု အရမ်းကြီး မမျှော်လင့်ထားဘူး။ဒါပေမယ့် ပရိသတ်ကိုတော့ အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။ရုံတင်တုန်းကလည်း ပရိသတ်တွေအားပေးခဲ့ကြတယ်။ပြဿနာလေးတွေရှိလာတော့လည်း ပရိသတ်တွေရော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ရုပ်ရှင်လောကသားတွေရော အားပေးခဲ့ကြတယ်။ကျေးဇူးရှိတယ်လို့ ခံစားရတယ်။” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။